टुङ्नामा जीवनको धुन खोज्ने वीरबहादुर कामी - Khula Patra
प्रकाशित समय: २१:११:५०
सुन्धाराको तामसिक कोलाहाल छिचोल्दै एउटा सात्विक धुन गुञ्जियो, तामाङ सेलोमा-
टुङ्नाको निख्खर रैथाने धुन पछ्याउँदै जाँदा भेटिए, वीरबहादुर विश्वकर्मा ।‘सालघारीबाट मालगाडी आयो, घुम्तीमा लेट भयो
तिमी छौ कहाँको, हामी छौं कहाँको काठमाडौंमा भेट भयो
धानकै बाला झुलाउँला, मायालाई भुलाउँला …..’
रुम नम्बर ३०२
साँघुरो कोठा । दुई सिंगल बेड । अट्याच बाथरुम । रित्तिइसकेको दूध चियाको जुठो कप । कंक्रिटको चिसो ।
सेतो सट, कालो इस्टकोट र कालै पाइन्टमा कुनै स्कुले पोशाकजस्तो पहिरिएर आफ्नो ज्यानलाई गुपचुप ‘होटेल एन्ड गेस्ट हाउस’को कोठामा थन्क्याइरहेका ।
त्यही सग्लो र परिचित हुलिया थियो, जो हामीले भर्चुअल दुनियाँमा छ्यापछ्याप्ती भेटेका थियौं । बौद्धतिरको भीडमा एकोहोरो टुङ्नामा तामाङ सेलो अलाप्दै खर्चपानी जुटाइरहेका । लेकको कुनै घर अघिल्तिर टुक्रुक्क बसेर केही तन्नेरीलाई ‘इन्टरटेन’ गराइरहेका । अनि, शहरका चर्चित ब्यान्डसँग लय मिलाइरहेका ।
भर्चुअल संसारमा उनी ‘सेलिब्रेटी’ भइसके । तर, उनले त्यसको भेउ पाएका छैनन् । किनभने, एक त उनी सिन्धुपाल्चोकको कुनै दुर्गम लेकमा बस्छन् । अर्कोचाहीं दृष्टि छैन । त्यसभन्दा खास्सा कुरोचाहीं, उनलाई यस्तो ‘चर्चा परिचर्चा’सँग कुनै मतलब छैन । मतलब छ त तीन लालाबाला र पत्नीका लागि कसरी माड जुटाउने ? कठ्यांगि्रने चिसा रातहरु कसरी कटाउने ?
खर्चपानी खोज्दै राजधानी
किन काठमाडौं आउनुभयो ? वीरबहादुरको हकमा यो प्रश्न नै बेकार छ ।
किनभने, उनलाई घुम्नु छैन, डुल्नु छैन, शहरको रमिता देख्नु छैन । तैपनि, बेलाबखत गाउँमै खबर पुग्छ, ‘एक पटक काठमाडौं आइदिनु पर्‍यो रे ।’
यस्ता आग्रह उनी चुपचाप स्वीकार्छन् । टुङ्ना भिर्छन् । र, अरनिको राजमार्ग छेउमा बसेर बस पर्खन्छन् । बस चढ्छन् । बसले शहीदगेटमा उतारिदिन्छ । उनी निम्तालुले चाँजोपाँजो मिलाइदिएको गेस्टहाउसमा पुग्छन् । काठमाडौं भनेकै सुन्धारा । उनी त्यहीं बस्छन् ।
यसपालि पनि कुनै सांगीतिक ब्यान्डको निम्तो मान्न उनी राजधानी आइपुगे, भान्जोलाई साथ लिएर । शुक्रबार उनले भुकृटीमण्डपमा गाउने मेलोमेसो मिलाइएको छ । शनिबार ब्यान्डसँगै पाटनको कुनै स्टेजमा उक्लिनेछन् ।
यसअघि हामीसँग उनी फोटोसुटका लागि तयार भए । सुन्धाराकै भीडमा उभिएर केही पोज दिए । कमलपोखरीको सिटी सेन्टरमा पुगेर एकाध गीत सुनाए । त्यही बेला कुनै संगीतकर्मीले उनलाई अफर गरे, ‘यही मौकामा तपाईंको धुन रेकर्ड गर्नुपर्‍यो ।’
त्यहाँबाट र्फकंदै गर्दा हामीले ‘गीत र टुङ्नाको धुन रेकर्ड गरेवापत तपाईंलाई पारिश्रमिक पनि आउँछ’ भनिदियौं । पारिश्रमिक सुनेर उनी गद्गद् भए ।
‘गाउँमा रासनपानी खाएको ८/१० हजार ऋण छ,’ उनले भने, ‘साहुलाई यसरी नै कमाउँला र ल्याएर तिरौंला भनेको थिएँ ।’
वीरबहादुरले टुङ्ना नबजाएसम्म उनको घरको धुन बज्दैन । अर्थात्, साना बालबच्चा, पत्नी र आफू पालिने भनेकै टुङ्ना बजाएर हो । आँखा सद्दे भएको भए मेलापात जान्थे होलान् वा लिपिङतिर गएर सामान ओसारपसार गर्थे होलान् । मालवाहक गाडीमा भारी लोड-अनलोड गर्थे होलान् । भोटेकोशीतिर माछा मार्न पुग्थे होलान् ।
तर, जन्मँदै उनीसँग दृष्टि भएन । चार वर्षका हुँदा बाबुको निधन भयो । उनको कुनै जायजेथा थिएन । कलिलै उमेरमा दुःखले थिचिए । न बच्चा हुन पाए, न किशोर । सानैदेखि पेट पाल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यही बाध्यताले धकेल्दै उनलाई मुरली फुक्न लगायो । भीडभाडमा पुगेर मुरलीको धुन फुके । २/४ रुपैयाँ जुट्थ्यो । तर, मुरलीको धुनले जीवनको धुन निकाल्न गाह्रो भयो ।
गाउँमा गुम्बा थियो । गुम्बामा लामा गुरु थिए । उनीसँग टुङ्ना थियो । र, त्यही बजाउँथे ।
टुङ्नाको धुन वीरबहादुरको मनको मुच्र्छनासँग जोडियो । उनले लामा गुरुलाई भने, ‘मलाई पनि बजाउन सिकाइदिनु पर्‍यो ।’
उनै लामाले टुङ्ना बजाउन सिकाए । कहिल्यै नदेखेको बाद्ययन्त्रबाट उनले धुन निकाले । पाँच सय रुपैयाँमा एउटा टुङ्ना किने । र, त्यही बोकेर जात्रा, मेला-पर्व चहार्न थाले । कहिले अरनिको राजमार्गको सडक किनारमा बसेर बजाए, कहिले बाह्रबिसे झरेर बजाए ।
रमितेहरुले मोबाइलमा उनको ‘प्रस्तुती’ दृश्यांकन गरे । कसैले फेसबुकमा अपलोड गरे, कसैले युट्युबमा । गुगल सर्च इन्जिनमा ‘वीरबहादुर विश्वकर्मा’ खोजेपछि उनी देखापर्न थाले । उनको ख्याती एक कान दुई कान, मैदान भयो ।
वीरबहादुर गाउँको चोकमा टुङ्ना बजाइरहेका थिए । शहरबाट गजब अफर आयो, सांगीतिक कार्यक्रम भाग लिने । निम्तो गर्ने समूह थियो, चर्चित ब्यान्ड कुटुम्ब । वीरबहादुर काठमाडौं आए । ३/४ दिन कुटुम्बसँगै अभ्यास गरे । पाटनमा कार्यक्रम भयो ।
कार्यक्रम सकेर घर फर्किंदा उनको खल्ती केही गह्रौं थियो ।
गीत गाएको पैसाले बिहे
उनी गायक थिएनन्, न त सेलिब्रेटी थिए । तर, काठमाडौंबाट ‘कमर्सियल निम्तो’ आयो । बोलाएका थिए, निमा लामाले । उनको बौद्धमा रेस्टुराँ रहेछ ।
त्यही रेस्टुराँका पाहुनालाई टुङ्नाको धुन सुनाइदिनुपर्ने । वीरवहादुरले खिपेर धुन निकाले, गाइदिए, तामाङ सेलो । घर फर्किने दिन लामाले दुःखसास्ती चार हजार रुपैयाँ हातमा थमाइदिए ।
त्यसअघि एकमुष्ठ यति धेरै पैसा थापेका थिएनन् । गाउँकै मेला, पर्वमा गाउँथे । लिपिङ बजारमा पुगेर गाउँथे । एक, डेढ सय कमाइ हुन्थ्यो ।
लामाले दिएको पैसा च्यापेर उनी गाउँ पुगे । घरमा पुगेपछि झ्वांक चल्यो, बिहे गर्ने । तर, कसलाई ?
आफूले खोज्नासाथ को आउँछ ? त्यो पनि दृष्टिविहीनसँग ?
तै कुरा मिलाइहेरे । बुहारीकै बहिनीसँग कुरा छिनाइयो । ती बहिनी विवाहित । तर, श्रीमान् परेछन् कान नसुन्ने । अलि लाटोजस्तो । ती बहिनीले निकै दुःख झेलिछन् । उनैलाई भगाएर घरमा ल्याइयो । घरमा ल्याएको भोलिपल्ट पत्नीले भनिन्, ‘काठमाडौं घुम्न लैजाऊ ।’
मनको रहर, कान्छीलाई घुमाउने
बिहे गरेपछि बचेको पैसा २५ सय रुपैयाँ । त्यही पैसा खल्तीमा च्यापेर उनी काठमाडौं आए, अरनिको यातायातको बसमा । एक जना सहयोगी पनि ल्याउनैपर्‍यो ।
बसले पूरानो बसपार्कमा उतारिदियो । बागबजारमा फुपूको छोराको डेरा थियो । पाहुना लाग्न गए । अब कता घुमाउने भनेर सोच्नुअघि नै उनको मनमा अर्को प्रश्नले चस्का हान्यो, कसरी घुमाउने ?
‘तीन जनाले खानुपर्‍यो, गाडी चढ्नुपर्‍यो,’ उनी फिस्स हाँसे, ‘त्यति खर्चले के पुग्थ्यो ?’
जसरी आएका थिए, उसैगरी फर्किए । पूरानो बसपार्कबाट बस चढेर सिन्धुपाल्चोक पुगे । राजमार्गमा ओर्लिएर हिँड्दै घर पुगे । त्यही बेला टुप्लुक्क पत्नीको पहिलो पति आइपुगेछन्, जारी उठाउन । उसलाई थामथुम पारेर पठाइयो । तर, चार दिनपछि फेरि चार जना प्रहरी लिएर आइपुगे ।
‘मलाई त डर-डर पनि लाग्यो,’ वीरवहादुरले भने, ‘स्थानीय समाज र आमा समूहले कुरा मिलायो । मैले दुई हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्‍यो ।’
सिटी सेन्टरमा भिडियो दृश्यांकन गरिरहँदा उनले भने, ‘म दुःख पाएर आएको छु । मेरो घर भूकम्पले भत्काएको छ । सानो टहरा बनाएर बसेको छु । मेरा एक पत्नी र तीन बच्चा छन् । बच्चाहरु सानै छन् । खेतीपाती छैन । म बलको काम गर्न सक्दिनँ… ।’
उनको यो भनाइमा सहयोगको अपेक्षा थियो । शायद आफ्नो आसपासमा भीड जम्मा भइसकेको उनले छनक पाइसकेका थिए ।
हामीसँग उनले भुकम्पको त्रासद् क्षण सुनाइसकेका थिए ।
त्यसबेला उनी घरमै रहेछन् । सानो छोरा कोक्रोमा, छोरी काखमा । उनी खाटमा । त्यहीबेला बेपत्तासँग धर्ती हल्लियो । अनौठो आवाजसँगै कोलाहल मच्चियो । कतै चिच्याएको, कतै कराएको सुनियो । उनले थाहा पाए, भूकम्प आएछ ।
तर, यो थाहा पाउँदा-नपाउँदै उनीको आधा ज्यान पुरिसकेको थियो, ढुंगा र माटोले । काखकी छोरी कता गइन्, कोक्रोको छोरो के भयो ? उनले केही भेउ पाउन सकेनन् । यताउता छमछुम गरे । ढुंगा र माटोको थुप्रो लागिसकेको थियो ।
त्यही बेला छोरी कतै छोरी रोएको आवाज सुने । उनी आवाज भएतिर लम्किन खोजे । तर, खुट्टा चलमलाएनन् । जिउ पुरै ढुंगा र माटोले पुरिएको थियो ।
भगवानले बचाएछन् । कोक्रो कोल्टे परेछ र टाँड परेर बसेछ । त्यही कारण नाबालक छोरा सकुशल रहेछन् । छोरी हत्तपत्त खाटमुनि घुसि्रइछन् । पछि पत्नीले आएर ढुंगा माटो खोतले । सबै जना सग्लो निस्किए ।
तर, उनको जीवन अहिलेसम्म सग्लो हुन सकेन । तंगि्रन सकेन । सरकारले दिएको ५० हजार रुपैयाँ त थियो । त्यसले सानो कटेरो हाल्न पनि नपुग्ने । ऋणपान गरेर टिनको टहरो बनाए । त्यही टहरामा ओत लागिरहेका छन् ।
लेकको चिसोमा तुसारोले चिस्सिएपछि भित्र बस्नै नसकिने । ‘चिसोले जिउ दुख्छ, आँखाबाट आँशु बग्छ,’ उनले बिलौना गरे, ‘नयाँ घर बनाउन सकिएको छैन ।’
ढुंगा र माटोको घर बनाउने तयारी गरेका छन् । तर, खर्च पुग्दो छैन । ‘सर, यसो कतैबाट सहयोग जुट्छ कि ?’ उनले आशा गरे, ‘साह्रै दुःख पाइयो ।’
‘जाडो छैन ?’ हाम्रो औपचारिक प्रश्न ।
बजाइरहेको टुङ्नालाई जतनसाथ छेवैमा राखेर उनले भने, ‘यहाँको के जाडो र हजुर, सजिलै पचाइन्छ । उता गाउँमा पो गाह्रो । टिनको छाप्रो छ । त्यसमाथि तुसारो पर्छ । मेरो ज्यानले त्यहाँको जाडो सहन छाडिसक्यो ।’
आँखाबाट झरेका आँशु हत्केलाले पुछे ।
‘तपाईंले बजाउने टुङ्नाको धुन साँच्चै मिठो, स्वर पनि राम्रो रहेछ नि त ?’
तारिफ सुनेर उनी मख्ख परे । उनको अनुहारमा लाज र खुशी मिश्रति अबोध हाँसो पोतियो।
पुनः छामछुम गर्दै टुङ्ना उठाए । र, हार्दिकतापूर्वक भने, ‘अब एउटा टिबेटन गीत सुनौं ?’ र, तिब्बती धुन पस्किए ।
धुन सुनिरहँदा यस्तो लाग्यो, कुनै बाक्लो भूँइकुहिरोले ढाकेको लेक, खर्कमा उग्राइरहेका भेडाका बथान, चिसो बतासमा फहराइरहेका ल्युहङ्दर, निख्खर सेतो माने, भेडीगोठबाट उडिरहेको पातलो धुँवा । र, त्यही एकलासे पृष्ठभूमिमा गुञ्जिएकोे संगीतमय आवाज !
साभार – अनलाइन खबरबाट ।